အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း- ၃) - For her Myanmar
အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း- ၃)
ဧကသု၏ အပြောအဆို၊ အမူအရာ၊ အကြည့်၊ အရာအားလုံးက ဟန်နီ့အတွက် ရင်ခုန်စရာများဖြစ်နေသည်။
ရှုတင်ရှိသည့် ဟိုတယ်ဝင်းထဲသို့ ကားကိုကွေ့ဝင်ပြီး ကားပါကင်မှာ နေရာတကျ ထိုးထားလိုက်သည်။ ဧကသုက ရှုတင်ကိုတစ်ယောက်တည်းလာလေ့ရှိပြီး သူ့မန်နေဂျာက နောက်မှ ကားနှင့် သီးသန့်လာလေ့ရှိသည်။ ဒီနေ့လိုမျိုး MTV ရိုက်ကွင်းလိုမျိုး ဆိုလျှင်တော့ တစ်ယောက်တည်းသာ အဝတ်အစား စီစဉ်ပြီး လာလေ့ရှိသည်။ အဝတ်အစားထည့်ထားသော လက်ဂေ့ဂ်ျကို ကားနောက်ခန်းမှဆွဲချပြီး ဟိုတယ်လော်ဘီထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။ ဒါရိုက်တာနှင့် ရိုက်ကွင်းအဖွဲ့သားများက ရောက်နှင့်နေပြီဖြစ်သည်။
“နောက်မကျပါဘူး ဧကရာ… မင်းကအမြဲ အချိန်မှန်တာပဲကို”
“ခဏနေရင် စမယ် ကုဋေထက်နဲ့ မင်းမောင် ကျန်သေးတယ် ဟန်နီမေက ရောက်နေပြီ”
ဟန်နီမေဆိုသောအသံကြောင့် ဧက မျက်ခုံးပင့်သွားသည်။ အစက ဒီရိုက်ကွင်းမှာ ဟန်နီမေပါတယ်ဟု မကြားမိ.. ကုဋေထက်နှင့် နှစ်ယောက်တည်းဟု ကြားထားသည်လေ။
“အေး အဆိုတော်နဲ့ စကားထပ်ပြောဖြစ်တော့ ဇာတ်ပုံစံနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ် မင်းနဲ့ ကုဋေက တစ်တွဲ မင်းမောင်နဲ့ ဟန်နီမေက တစ်တွဲ အဲဒီလိုလေး ပုံဖော်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်လို့”
“သြော်… ဟန်နီမေက အခုဘယ်မှာလဲ”
“outdoor scene စမှာမို့လို့ ရေကူးကန်နားမှာ…ဒါနဲ့ ဧက ဟန်နီမေက မင်းနဲ့သိတယ်မလား”
“အင်း အဲဒါကြောင့် သွားနှုတ်ဆက်မလို့”
ဧက ဒါရိုက်တာကို ပြန်ဖြေပြီး ရေကူးကန်ဘက် ထွက်လာခဲ့သည်။ ရေကူးကန်နားတွင် ဒူးဖုံးဂါဝန်အဖြူလေးနှင့် ဂျင်းအင်္ကျီအပါးလေး ထပ်ဝတ်ထားသော ဟန်နီမေ့ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ဧကခြေလှမ်းများက အလိုလို ဟန်နီမေရှိရာကို လှမ်းနေမိသည်။
Related Article >>> အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း
“ဟယ် ကိုဧက ဘယ်ကိုလာတာလဲ”
“သြော် ဒီလိုလေ ကျွန်တော်ကရိုက်ကွင်းကိုလာတာ ဒါပေမဲ့ ဟန်နီ့ကိုတွေ့လိုက်လို့ ဟန်နီ့ဆီကိုလာလိုက်တာ”
“ဟန်နီ့ကြည့်ရတာ ကိုယ့်ကိုမြင်တာ သိပ်ဝမ်းမသာသလိုပဲနော်”
“မဟုတ်ပါဘူး ဝမ်းသာပါတယ် ဟန်နီက ဒီလိုပဲနေတတ်လို့ပါ”
ဧက ကရေကူးကန်ဘေးနားက ခုံလေးကိုလက်နဲ့ညွှန်ပြတော့ ဟန်နီလည်းခေါင်းညိတ်ရင်း ထိုင်ချလိုက်သည်။ တကယ်တော့ ဟန်နီသည် ဧကသုကို မထင်မှတ်ဘဲ မြင်လိုက်ရတော့ ထခုံမိမတတ် ဝမ်းသာသွားသည်။ ဝမ်းသာလုံး ဆို့သွားလို့ ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်လောက်အောင်သာ ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ကြည့်လိုက်တိုင်း နွေးထွေးပုံပေါ်သော မျက်ဝန်းများက ဟန်နီ့ ကို လှလှပပကြီး ဖမ်းစားနေလေပြီ။ ဧကသု၏ အပြောအဆို၊ အမူအရာ၊ အကြည့်၊ အရာအားလုံးက ဟန်နီ့အတွက် ရင်ခုန်စရာများဖြစ်နေသည်။ ဟန်နီနှင့် ဧကသုစကားလက်ဆုံကျနေစဉ် ယမုံရောက်လာသည်။
“ဟန်နီရေ ရှုတင်စတော့မယ်…. နေပါဦး ဒါဘယ်သူလဲ… ကိုဧကသုပါလား.. ကျွန်မသူငယ်ချင်းကို တစ်ခုခု တိုက်လိုက်သေးလား””
“ဟင် မတိုက်ပါဘူးဗျာ ဘာလို့လဲ”
“သြော် စိတ်ပူလို့ပါ ဟိုနေ့ညကလို အလာဂျီထမှာစိုးလို့”
ယမုံ့ရဲ့စကားကိုကြားတော့ ဧကသုက ဟန်နီ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်သည်။ ဟန်နီကတော့ ယမုံ့ကို အလိုက်မသိလေခြင်း ဟု စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီး အပြစ်တင်ကာ ဧကကို အားနာပြုံးလေး ပြုံးပြလိုက်သည်။
“အားနာလိုက်တာ ဟန်နီရယ် ကျွန်တော် တကယ်ကို မရည်ရွယ်တာပါ”
“ရပါတယ် ကိုဧက နည်းနည်းပါးပါးပါပဲ”
“ကဲ ဟန်နီ ရှုတင်က စတော့မယ် ကိုဧကသု ရှင့်ကိုဒါရိုက်တာခေါ်နေပြီ”
ယမုံ ကြားက ဝင်ပြောလိုက်တော့ ဧကသုက “အိုကေ” ဟုပြောကာ ဟိုတယ်ထဲပြန်ဝင်သွားသည်။ ဟန်နီက ယမုံ့ကို မျက်စောင်းထိုးရင်း…
“ယမုံကလည်း ဘာလို့ပြောလိုက်တာလဲ အားနာစရာကြီး”
“ဟဲ့ ဘာအားနာစရာလိုလဲ.. သူတိုက်တာသောက်ပြီး နင်အလာဂျီဖြစ်တာအမှန်ပဲလေ မဟုတ်ဘူးလား”
“ဒါတော့ ဒါပေါ့ဟယ် ဒါပေမဲ့..”
“ဒါပေမဲ့မနေနဲ့… နင်နော် သူ့ကိုဆို ပိုလွန်းတယ်… နင့်မှာ မိတ်ဆွေအသစ်တိုးလာတာ ငါဝမ်းသာပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုတော့ မိတ်ဆွေအဆင့်ထက် မပိုစေချင်ဘူး သူ့မျက်လုံးတွေက ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး”
“ဟင် ဒီလောက်လှတဲ့မျက်လုံးတွေကို” ဆိုသော စကားကိုတော့ စိတ်ထဲမှသာ ပြန်ပြောလိုက်မိသည်။ ယမုံက ဟန်နီ့ကို စေတနာအမှန်နှင့် စိတ်ပူပေးနေမှန်း သိသောကြောင့် “အင်းပါ” ဟုသာ ပြောလိုက်သည်။ သို့သော် ဧကသုက ယမုံ စိတ်ပူနေသလိုမဟုတ်ဘဲ စိတ်ရင်းကောင်းပြီး နွေးထွေးကြင်နာတတ်သူဖြစ်ကြောင်း ဟန်နီကိုယ်တိုင်သာ သိလေသည်။
ဟန်နီသည် သီချင်းလေးညည်းရင်း ကားကို ခပ်မှန်မှန်လေးမောင်းလာခဲ့သည်။ ပုံမှန်ဆို ဟန်နီက ကားမောင်းပြီး သွားလေ့ရှိသူမဟုတ်ပေမဲ့ ဒီနေ့တော့ ယမုံ့ကို မခေါ်ချင်သောကြောင့် ကိုယ်တိုင် မောင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီနေ့မနက်တစ်ပိုင်းလုံးအားပြီး ညနေပိုင်းသာ ရှုတင်ရှိသောကြောင့် ယမုံက ဟန်နီ့အနားတွင်ရှိမနေသည်က တစ်ယောက်တည်းသွားချင်သော ဟန်နီ့အတွက်အခွင့်ကောင်းပင်ဖြစ်သည်။ ပါတီပွဲတွင် ဧကတိုက်သောအအေးကိုသောက်ရင်း အလာဂျီဖြစ်သွားသော ကိစ္စ ကို ဧကသုက တောင်းပန်ရင်း နေ့လယ်စာကျွေးချင်သည် ဆိုသောကြောင့် ဟန်နီက ယမုံမသိအောင် တိတ်တိတ်ကလေး လက်ခံပြီး ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဟန်နီက ကားကို လမ်းသွယ်မှ လမ်းမတန်းသို့ ကွေ့ပြီးအထွက်တွင် လမ်းမတန်းမှ ကွေ့ဝင်လာသော လူတစ်ယောက်ကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်သောကြောင့် ကားကိုဘရိတ်အမြန်အုပ်လိုက်ရသည်။ ကျွီကနဲ မြည်သံနှင့်အတူ ဟန်နီလည်း ရှေ့ကိုငိုက်ကျသွားသည်။ သွားပြီ.. တိုက်ပြီလားမသိ..။ ဟန်နီ့တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ယင်စွာဖြင့် ကားရှေ့ကိုလည်ပင်းရှည်ကာကြည့်လိုက်သည်။ ဟန်နီ့ကားနှင့်တိုးမိသောသူက သူ့ဘာသာကုန်းရုန်းထပြီး ပေသွားသော ဖုန်များကိုခါနေသည်။ ဟန်နီသည် ရင်ဘတ်ကိုဖိကာ “တော်သေးတာပေါ့” ဟုခပ်တိုးတိုးရေရွတ်ရင်း ကားတံခါးဖွင့်ကာဆင်းလိုက်သည်။
“ဘာဖြစ်သွားသေးလဲဟင် ဟန်နီတောင်းပန်ပါတယ်နော် ရှင်ကရုတ်တရက်ကြီးထွက်လာလို့ပါ”
“ရပါတယ် ကျွန်တော်လည်းကားကိုမမြင်လိုက်လို့… ဟာ မဟန်နီမေပါလား နေကောင်းသွားပြီပေါ့”
ထိုသူကနှုတ်ဆက်မှ ဟန်နီကသေချာကြည့်မိသည်။ ဟိုတစ်ခါက ကပိုကယိုဖြစ်နေတဲ့ ဆရာဝန်က အခုကျတော့ ရှပ်လက်ရှည်နှင့်စတိုင်ပန်နှင့် သပ်ရပ်နေသည်။ ဆံပင်ကိုလည်း သေချာဖြီးထားသောကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဆရာဝန်ပုံ ပေါက်နေလေသည်။
“ကျွန်တော် အရမ်းချောနေလို့ မမေ မမှတ်မိတာ သဘာဝကျပါတယ်”
“မမေ လို့ခေါ်လိုက်တာပါ နာမည်အပြည့်အစုံခေါ်တော့ နည်းနည်းရှည်သလားလို့”
“မရှည်ပါဘူး ၃ လုံးတည်းလေ ဟန် နီ မေ”
ဇွဲသစ်က ဟန်နီမေပြောသော ပုံလေးကို သဘောကျကာပြုံးလိုက်ရင်း…
“ဟုတ်ပါပြီ မမေက မကြိုက်ရင်လည်း မခေါ်တော့ပါဘူး… သြော် ပြောရင်းဆိုရင်းခေါ်မိပြန်ပြီ”
“ကဲ ထားလိုက်တော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်း ကျွန်မသွားတော့မယ်”
“ဟုတ်ကဲ့ ကားကို သထိထားမောင်းပါ”
ခေါင်းတစ်ချက်ညိတ်ပြကာ ကားပေါ်တက်ပြီး မောင်းထွက်သွားသည့် ဟန်နီ့ကားလေးကို မြင်ကွင်းမှ ပျောက်သွားသည်အထိ ဇွဲသစ်ရပ်ကြည့်နေမိသည်။
ဧကသု၏ အပွောအဆို၊ အမူအရာ၊ အကွညျ့၊ အရာအားလုံးက ဟနျနီ့အတှကျ ရငျခုနျစရာမြားဖွဈနသေညျ။
ရှုတငျရှိသညျ့ ဟိုတယျဝငျးထဲသို့ ကားကိုကှဝေ့ငျပွီး ကားပါကငျမှာ နရောတကြ ထိုးထားလိုကျသညျ။ ဧကသုက ရှုတငျကိုတဈယောကျတညျးလာလရှေိ့ပွီး သူ့မနျနဂြောက နောကျမှ ကားနှငျ့ သီးသနျ့လာလရှေိ့သညျ။ ဒီနလေို့မြိုး MTV ရိုကျကှငျးလိုမြိုး ဆိုလြှငျတော့ တဈယောကျတညျးသာ အဝတျအစား စီစဉျပွီး လာလရှေိ့သညျ။ အဝတျအစားထညျ့ထားသော လကျဂဂြေျ့ကို ကားနောကျခနျးမှဆှဲခပြွီး ဟိုတယျလျောဘီထဲသို့ဝငျခဲ့သညျ။ ဒါရိုကျတာနှငျ့ ရိုကျကှငျးအဖှဲ့သားမြားက ရောကျနှငျ့နပွေီဖွဈသညျ။
“နောကျမကပြါဘူး ဧကရာ… မငျးကအမွဲ အခြိနျမှနျတာပဲကို”
“ခဏနရေငျ စမယျ ကုဋထေကျနဲ့ မငျးမောငျ ကနျြသေးတယျ ဟနျနီမကေ ရောကျနပွေီ”
ဟနျနီမဆေိုသောအသံကွောငျ့ ဧက မကျြခုံးပငျ့သှားသညျ။ အစက ဒီရိုကျကှငျးမှာ ဟနျနီမပေါတယျဟု မကွားမိ.. ကုဋထေကျနှငျ့ နှဈယောကျတညျးဟု ကွားထားသညျလေ။
“အေး အဆိုတျောနဲ့ စကားထပျပွောဖွဈတော့ ဇာတျပုံစံနညျးနညျးပွောငျးသှားတယျ မငျးနဲ့ ကုဋကေ တဈတှဲ မငျးမောငျနဲ့ ဟနျနီမကေ တဈတှဲ အဲဒီလိုလေး ပုံဖျောရငျ ပိုကောငျးမယျထငျလို့”
“သွျော… ဟနျနီမကေ အခုဘယျမှာလဲ”
“outdoor scene စမှာမို့လို့ ရကေူးကနျနားမှာ…ဒါနဲ့ ဧက ဟနျနီမကေ မငျးနဲ့သိတယျမလား”
“အငျး အဲဒါကွောငျ့ သှားနှုတျဆကျမလို့”
ဧက ဒါရိုကျတာကို ပွနျဖွပွေီး ရကေူးကနျဘကျ ထှကျလာခဲ့သညျ။ ရကေူးကနျနားတှငျ ဒူးဖုံးဂါဝနျအဖွူလေးနှငျ့ ဂငျြးအင်ျကြီအပါးလေး ထပျဝတျထားသော ဟနျနီမကေို့ တှလေို့ကျရသညျ။ ဧကခွလှေမျးမြားက အလိုလို ဟနျနီမရှေိရာကို လှမျးနမေိသညျ။
Related Article >>> အခဈြ၏ အမှောငျဘကျခွမျး
“ဟယျ ကိုဧက ဘယျကိုလာတာလဲ”
“သွျော ဒီလိုလေ ကြှနျတျောကရိုကျကှငျးကိုလာတာ ဒါပမေဲ့ ဟနျနီ့ကိုတှလေို့ကျလို့ ဟနျနီ့ဆီကိုလာလိုကျတာ”
“ဟနျနီ့ကွညျ့ရတာ ကိုယျ့ကိုမွငျတာ သိပျဝမျးမသာသလိုပဲနျော”
“မဟုတျပါဘူး ဝမျးသာပါတယျ ဟနျနီက ဒီလိုပဲနတေတျလို့ပါ”
ဧက ကရကေူးကနျဘေးနားက ခုံလေးကိုလကျနဲ့ညှနျပွတော့ ဟနျနီလညျးခေါငျးညိတျရငျး ထိုငျခလြိုကျသညျ။ တကယျတော့ ဟနျနီသညျ ဧကသုကို မထငျမှတျဘဲ မွငျလိုကျရတော့ ထခုံမိမတတျ ဝမျးသာသှားသညျ။ ဝမျးသာလုံး ဆို့သှားလို့ ဘာမှ ပွနျမပွောနိုငျလောကျအောငျသာ ဖွဈသှားခွငျးဖွဈသညျ။
ကွညျ့လိုကျတိုငျး နှေးထှေးပုံပျေါသော မကျြဝနျးမြားက ဟနျနီ့ ကို လှလှပပကွီး ဖမျးစားနလေပွေီ။ ဧကသု၏ အပွောအဆို၊ အမူအရာ၊ အကွညျ့၊ အရာအားလုံးက ဟနျနီ့အတှကျ ရငျခုနျစရာမြားဖွဈနသေညျ။ ဟနျနီနှငျ့ ဧကသုစကားလကျဆုံကနြစေဉျ ယမုံရောကျလာသညျ။
“ဟနျနီရေ ရှုတငျစတော့မယျ…. နပေါဦး ဒါဘယျသူလဲ… ကိုဧကသုပါလား.. ကြှနျမသူငယျခငျြးကို တဈခုခု တိုကျလိုကျသေးလား””
“ဟငျ မတိုကျပါဘူးဗြာ ဘာလို့လဲ”
“သွျော စိတျပူလို့ပါ ဟိုနညေ့ကလို အလာဂြီထမှာစိုးလို့”
ယမုံ့ရဲ့စကားကိုကွားတော့ ဧကသုက ဟနျနီ့ဘကျကိုလှညျ့ကွညျ့သညျ။ ဟနျနီကတော့ ယမုံ့ကို အလိုကျမသိလခွေငျး ဟု စိတျထဲကကွိတျပွီး အပွဈတငျကာ ဧကကို အားနာပွုံးလေး ပွုံးပွလိုကျသညျ။
“အားနာလိုကျတာ ဟနျနီရယျ ကြှနျတျော တကယျကို မရညျရှယျတာပါ”
“ရပါတယျ ကိုဧက နညျးနညျးပါးပါးပါပဲ”
“ကဲ ဟနျနီ ရှုတငျက စတော့မယျ ကိုဧကသု ရှငျ့ကိုဒါရိုကျတာချေါနပွေီ”
ယမုံ ကွားက ဝငျပွောလိုကျတော့ ဧကသုက “အိုကေ” ဟုပွောကာ ဟိုတယျထဲပွနျဝငျသှားသညျ။ ဟနျနီက ယမုံ့ကို မကျြစောငျးထိုးရငျး…
“ယမုံကလညျး ဘာလို့ပွောလိုကျတာလဲ အားနာစရာကွီး”
“ဟဲ့ ဘာအားနာစရာလိုလဲ.. သူတိုကျတာသောကျပွီး နငျအလာဂြီဖွဈတာအမှနျပဲလေ မဟုတျဘူးလား”
“ဒါတော့ ဒါပေါ့ဟယျ ဒါပမေဲ့..”
“ဒါပမေဲ့မနနေဲ့… နငျနျော သူ့ကိုဆို ပိုလှနျးတယျ… နငျ့မှာ မိတျဆှအေသဈတိုးလာတာ ငါဝမျးသာပါတယျ ဒါပမေဲ့ သူ့ကိုတော့ မိတျဆှအေဆငျ့ထကျ မပိုစခေငျြဘူး သူ့မကျြလုံးတှကေ ပုံမှနျမဟုတျဘူး”
“ဟငျ ဒီလောကျလှတဲ့မကျြလုံးတှကေို” ဆိုသော စကားကိုတော့ စိတျထဲမှသာ ပွနျပွောလိုကျမိသညျ။ ယမုံက ဟနျနီ့ကို စတေနာအမှနျနှငျ့ စိတျပူပေးနမှေနျး သိသောကွောငျ့ “အငျးပါ” ဟုသာ ပွောလိုကျသညျ။ သို့သျော ဧကသုက ယမုံ စိတျပူနသေလိုမဟုတျဘဲ စိတျရငျးကောငျးပွီး နှေးထှေးကွငျနာတတျသူဖွဈကွောငျး ဟနျနီကိုယျတိုငျသာ သိလသေညျ။
ဟနျနီသညျ သီခငျြးလေးညညျးရငျး ကားကို ခပျမှနျမှနျလေးမောငျးလာခဲ့သညျ။ ပုံမှနျဆို ဟနျနီက ကားမောငျးပွီး သှားလရှေိ့သူမဟုတျပမေဲ့ ဒီနတေ့ော့ ယမုံ့ကို မချေါခငျြသောကွောငျ့ ကိုယျတိုငျ မောငျးလာခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ဒီနမေ့နကျတဈပိုငျးလုံးအားပွီး ညနပေိုငျးသာ ရှုတငျရှိသောကွောငျ့ ယမုံက ဟနျနီ့အနားတှငျရှိမနသေညျက တဈယောကျတညျးသှားခငျြသော ဟနျနီ့အတှကျအခှငျ့ကောငျးပငျဖွဈသညျ။ ပါတီပှဲတှငျ ဧကတိုကျသောအအေးကိုသောကျရငျး အလာဂြီဖွဈသှားသော ကိစ်စ ကို ဧကသုက တောငျးပနျရငျး နလေ့ယျစာကြှေးခငျြသညျ ဆိုသောကွောငျ့ ဟနျနီက ယမုံမသိအောငျ တိတျတိတျကလေး လကျခံပွီး ထှကျလာခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ဟနျနီက ကားကို လမျးသှယျမှ လမျးမတနျးသို့ ကှပွေီ့းအထှကျတှငျ လမျးမတနျးမှ ကှဝေ့ငျလာသော လူတဈယောကျကိုရုတျတရကျမွငျလိုကျသောကွောငျ့ ကားကိုဘရိတျအမွနျအုပျလိုကျရသညျ။ ကြှီကနဲ မွညျသံနှငျ့အတူ ဟနျနီလညျး ရှကေို့ငိုကျကသြှားသညျ။ သှားပွီ.. တိုကျပွီလားမသိ..။ ဟနျနီ့တဈကိုယျလုံးတုနျယငျစှာဖွငျ့ ကားရှကေို့လညျပငျးရှညျကာကွညျ့လိုကျသညျ။ ဟနျနီ့ကားနှငျ့တိုးမိသောသူက သူ့ဘာသာကုနျးရုနျးထပွီး ပသှေားသော ဖုနျမြားကိုခါနသေညျ။ ဟနျနီသညျ ရငျဘတျကိုဖိကာ “တျောသေးတာပေါ့” ဟုခပျတိုးတိုးရရှေတျရငျး ကားတံခါးဖှငျ့ကာဆငျးလိုကျသညျ။
“ဘာဖွဈသှားသေးလဲဟငျ ဟနျနီတောငျးပနျပါတယျနျော ရှငျကရုတျတရကျကွီးထှကျလာလို့ပါ”
“ရပါတယျ ကြှနျတျောလညျးကားကိုမမွငျလိုကျလို့… ဟာ မဟနျနီမပေါလား နကေောငျးသှားပွီပေါ့”
ထိုသူကနှုတျဆကျမှ ဟနျနီကသခြောကွညျ့မိသညျ။ ဟိုတဈခါက ကပိုကယိုဖွဈနတေဲ့ ဆရာဝနျက အခုကတြော့ ရှပျလကျရှညျနှငျ့စတိုငျပနျနှငျ့ သပျရပျနသေညျ။ ဆံပငျကိုလညျး သခြောဖွီးထားသောကွောငျ့ ဒီတဈခါမှာတော့ ဆရာဝနျပုံ ပေါကျနလေသေညျ။
“ကြှနျတျော အရမျးခြောနလေို့ မမေ မမှတျမိတာ သဘာဝကပြါတယျ”
“မမေ လို့ချေါလိုကျတာပါ နာမညျအပွညျ့အစုံချေါတော့ နညျးနညျးရှညျသလားလို့”
“မရှညျပါဘူး ၃ လုံးတညျးလေ ဟနျ နီ မေ”
ဇှဲသဈက ဟနျနီမပွေောသော ပုံလေးကို သဘောကကြာပွုံးလိုကျရငျး…
“ဟုတျပါပွီ မမကေ မကွိုကျရငျလညျး မချေါတော့ပါဘူး… သွျော ပွောရငျးဆိုရငျးချေါမိပွနျပွီ”
“ကဲ ထားလိုကျတော့ ဘာမှမဖွဈဘူးဆိုရငျလညျး ကြှနျမသှားတော့မယျ”
“ဟုတျကဲ့ ကားကို သထိထားမောငျးပါ”
ခေါငျးတဈခကျြညိတျပွကာ ကားပျေါတကျပွီး မောငျးထှကျသှားသညျ့ ဟနျနီ့ကားလေးကို မွငျကှငျးမှ ပြောကျသှားသညျအထိ ဇှဲသဈရပျကွညျ့နမေိသညျ။
Tags: Dark, Fiction Series, love, psychology, Relationship, Side
For Her Myanmar April 1, 2019